မော်နီကာဆန် | | အမေရိကတိုက်, ခရီးသွားနေရာများ, ယေဘုယျ
ရေကန်များကအံ့ are စရာကောင်းလောက်အောင်ထိန်းသိမ်းထားရမယ့်အံ့သြစရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ပနားမားတွင်တွေ့ရမည့်သူများအတွက်၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်အတုဖြစ်သော်လည်းအမှန်တကယ်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်အပူပိုင်းသစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့်တိရစ္ဆာန်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေပြီးသင့်အားအိမ်၌ပင်နေစေနိုင်သည် စင်ကြယ်သောလေနှင့်သဘာဝကိုယ်နှိုက်ကပင်သင့်ကိုယ်သင် ပို၍ သိကျွမ်းရန်ကူညီနိုင်သည်
သင်ပနားမားရေကန်များကိုလှည့်လည်ကြည့်ချင်ပါသလား။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ သင်ဟာအိမ်ကနေထွက်သွားစရာမလိုတော့ပေမယ့်လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်ပြီးနောက်မှာတော့လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။
2 Gatun ရေကန်
3 Alajuela ရေကန်
4 San Carlos Lagoon
5 Miraflores ရေကန်
7.1 ¿ Es seguro?
ကျနော်တို့လာရောက်လည်ပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းစတင်ပါလိမ့်မယ် Chiriquíဂွ, တိုင်းပြည်၏အဓိကဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလှိုဂျက်သည်ကော့စတာရီကာ၏အရှေ့တောင်ပိုင်းနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသော Bocas del Toro ကျွန်းစုနှင့်ဆက်သွယ်ထားသည်။ အရှေ့ဘက်ရှိChiriquí lagoon နှင့်အနောက်ဘက်ရှိ Almirante ပင်လယ်အော်တို့တွင်ရှိသည်။ ကျွန်းနှစ်ခုကြားမှာကျွန်းဆွယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Popa ကျွန်းနဲ့ Cayo de Agua ကိုတွေ့လိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့စဉ်းစားကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးကိုဆက်လက် Gatun ရေကန်။ ဤသည်မှာပနားမားတူးမြောင်းတွင်တည်ရှိသည့်အတုရေကန်ဖြစ်ပြီး ၁၉၀၇ မှ ၁၉၁၃ အတွင်း Chagres မြစ်ပေါ်တွင်Gatúnဆည်တည်ဆောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင်၎င်းသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအတုအိုင်ကြီးဖြစ်ပြီးလက်ရှိတွင်1907ရိယာ ၄၃၅ ကီလိုမီတာရှိပြီးပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၂၆ မီတာတွင်ရှိသည်။
ထိုနေရာမှအလွန်ဝေးရာသို့သွားစရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားအတုရေကန်များကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် Alajuelaကော့စတာရီကာ၏အစ်မသမ္မတနိုင်ငံ၏ပြည်နယ်အား၎င်း၏အမည်ကိုပေးအပ်သော။ ၎င်းကို Madden ဆည် (Chagres) မြစ်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
San Carlos Lagoon
မင်းအဲဒါကိုမြင်ပြီလို့ထင်ရင်မင်းအမှန်တရားကဒါပဲ အဆိုပါ San Carlos ဂွ သင်၏ယုံကြည်မှုများကိုမေးခွန်းထုတ်လိမ့်မည်။ နှစ်ခုဟက်တာWithရိယာနှင့်တကွ, အပူပိုင်းဒေသသစ်ပင်များကိုလုံးဝဝိုင်းရံထားသည် ကောင်းပါတယ် ထို့အပြင်၊ အကယ်၍ သင်သည်အပျိုစင်သစ်တောများကိုအိပ်မက်မက်ဖူးပါက၊ ဤအရပ်သို့သွားသောအခါထိုအိပ်မက်အကောင်အထည်ပေါ်လာသည်ကိုသင်သိလိမ့်မည်။
ပနားမားတူးမြောင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအတုရေကန်ဖြစ်သော Miraflores Lake သို့သွားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ခရီးကိုအဆုံးသတ်သည်။ ပြီးတော့မြို့တော်ကနေ ၁၅ မိနစ်သာလိုတယ်။ ၎င်းသည် Camino de Cruces အမျိုးသားဥယျာဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Miraflores ရေသန့်စင်စက်ရုံသည်လိုအပ်သောအရည်ကိုဤဒေသများသို့သယ်ဆောင်သောကြောင့် San Felipe, Curundú, Ancónမြို့များအတွက်အရေးကြီးသည်။
မင်းအဲဒီမှာခရီးသွားရတာကိုသဘောကျသလား အဲဒီလိုဆိုရင်သင်ပနားမားမှာရာသီဥတုအခြေအနေကိုသိချင်မှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီမယုံနိုင်လောက်တဲ့နေရာတွေကိုခံစားနိုင်ဖို့ပါ သင့်လျော်သောအဝတ်အစားထုပ်ပိုးရန်လိုအပ်ပါသည်.
အဖြစ်ကောင်းစွာ။ ပနားမားသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးအပူရှိန်ကိုအပူတပြင်းမှတ်ပုံတင်သောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ယခုသင်သိထားသင့်သည်မှာtwoရိယာနှစ်ခုရှိသည်။ တစ်ခုမှာပုံမှန်အားဖြင့်အပူပိုင်းဒေသဖြစ်ပြီးပျမ်းမျှအပူချိန် ၂၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့်ရှိပြီးမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောဒေသများဥပမာChiriquíကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ပျမ်းမျှအပူချိန်မှာ ၁၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်သောကြောင့်အအေးဆုံးလများတွင်မြင့်မားသောအမြင့်ဒေသများ၌ကဲ့သို့-22ºCသို့ကျဆင်းနိုင်သည်။
ဒါကြောင့်ဒီကိုလာလည်ပတ်ရင်နွေရာသီအဝတ်အစားတွေယူဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ အိုးစကားမစပ် မိုးကာအင်္ကျီကိုမမေ့ပါနှင့်.
၎င်းသည်အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးယေဘုယျအားဖြင့်လုံခြုံသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ တကယ်တော့သူကစာရင်းထဲမှာရောက်နေပြီ အနည်းဆုံးအကြမ်းဖက်နိုင်ငံများ အမေရိကန်တိုက်ကြီးမှ။ ဒါကြောင့်စိတ်ပူစရာဘာမှမရှိတော့ဘူး။
လိုအပ်သည်မဟုတ်ပါ အဝါရောင်အဖျားကိုကာကွယ်ဆေးထိုးရန်အကြံပြုလိုသည်။ အကယ်၍ ဆေးထိုးအပ်များကိုသိပ်မကြိုက်ပါကခြင်ဆေးကိုသင်နှင့်အတူယူရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
စာအုပ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများ၊ သင်ဖတ်လိုလျှင်စာအုပ်တစ်အုပ်ယူရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အမေရိကတိုက် » ပနားမားရေကန်များ
ယခုတကြိမ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပနားမားရှိအရေးအကြီးဆုံးရေကန်များကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ပနားမားတူးမြောင်းကိုဖြတ်သန်းသွားသောသင်္ဘောများအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတုဖြစ်သောGatúnရေကန်သို့စတင်လည်ပတ်ကြပါစို့။ ထိုကန်ကို ၁၉၁၃ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၄၂၅ စတုရန်းကီလိုမီတာရှိသည်။
Alhajuela ရေကန်သည် Chagres မြစ်ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး၎င်းသည်ပနားမားတူးမြောင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအတုရေကန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Alhajuela ရေကန်သည်တူးမြောင်းအတွက်ရေလှောင်ကန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
အီစတာ (၂) တွင်အပူကိုခံစားရန်အစီအစဉ်ငါးခု
ကော့စတာဘရာဗာရဲ့အကောင်းဆုံး - Cala Corbs